Ngokwesiko eRussia okugeza kwakungumkhuba wansuku zonke cishe wonke umndeni. Namuhla ukuthandwa kwamakamelo okushisa akufani nezinsuku zakudala, kodwa futhi kuphakeme kakhulu. Kuvame ukukholelwa ukuthi ukugeza nokuvakashela ama-saunas kunomphumela omuhle empilweni, kodwa kukhona nemingcele eminingi yokuvakashelwa kwabo. Ngakho-ke, odokotela abathile bancoma ukuthi bayeke abafana abakhulelwe. Kungani lokhu kwenzeka? Impilo yabesifazane besimanje ayikwazi ukuqhathaniswa nempilo yabesifazane abaqinile nabahlala njalo abahlala kulo, bevakashela amabhati cishe nsuku zonke. Ezikhathini zokuqala zokukhulelwa, kuyingozi kakhulu ukuhlala ekamelweni elishisayo. Emazingeni aphezulu okushisa, ingozi yokubunjwa okungavamile kwe-placenta iyanda, okwandisa kakhulu amathuba okubeletha kwesisu.
Uma owesifazane esengozini yokuqeda ukukhulelwa noma kunezinye izinkinga zokuthuthukiswa komntwana, akuvunyelwe ukuvakashela indlu yokugeza. Kunoma yikuphi, ngaphambi kokuvakashela i-sauna noma ukugeza wonke owesifazane okhulelwe kufanele abonane nodokotela wakho.
Zuza ukuvakashela umama ngekusasa
Uma ukukhulelwa kungaphezu kwamaviki ayisishiyagalombili futhi akukho ukuphikisana, ukuvakashela i-sauna kungaba nomoya omuhle nokulungiselela isenzakalo esibaluleke kunawo wonke wesifazane - ukubukeka kwengane.
Ukuhlala njalo emakamelweni onomoya omanzi oshisayo kunomphumela omuhle ohlelweni lomjikelezo wesifazane. Qinisekisa imithwalo yegazi, ithuthukise ukuhlinzeka kwegazi kumisipha kanye nezitho zangaphakathi, ukwandisa ukuqina kwezimpawu, ukukhulula ukuhlukumeza emisipha, isikhumba sibe siqina ngokwengeziwe, okusiza ukuvimbela ukubonakala kwamanothi okuloba. Ukwenza ngcono ukujikelezwa kwegazi komama okhulelwe, kungenzeka ukuvimbela inqubo yokuguga kwasekuqaleni kwe-placenta, ukunciphisa ingozi ye-intrauterine hypoxia ye-fetus, futhi ususe ithoni ekhulayo yesibeletho.
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile kusiza ukuqinisa ingculazi, ukuvimbela okuhle ukuvela kwemibanda. Ngaphezu kwalokho, ukuhlala ekamelweni le-steam kuvuselela futhi kuvuselele isimiso sezinzwa. Kungaba kanjani umama esikhathini esizayo kangcono kunesikhathi esimnandi sokuhambisa enkampanini enhle ngendebe yethishi elimnandi elimnandi!
Izincomo uma uvakashela ukugeza okukhulelwe
Ukugcina imithetho elula yowesifazane okhulelwe, ukuya ekugezeni ngeke kubangele ukulimala, kodwa ngokuphambene nalokho, kuzosiza ukuzizwa unempilo, elula futhi engokomoya.
Akufanele uvakashele i-bathhouse yedwa. Kungcono ukwenza lokhu, uhamba nabangani noma umyeni othandekayo.
Ukushisa kwomoya ekamelweni le-steam akufanele kube ngaphezu kwama-80-90 degrees. Isikhathi sokuhlala akufanele sidlule imizuzu eyi-10.
Ukugeza kudingekile ekhanda eliyingqayizivele noma ithawula, izicathulo kanye nephepha elihlanzekile. Lokhu kuzosiza ukuvikela owesifazane ekutholeni izifo ezithathelwanayo.
Kumele ushiye masinyane igumbi le-steam ekuqaleni kwezimpawu ze-malaise: i-nausea, isizungu, ubuhlungu esiswini esingaphansi.
Sebenzisa amafutha abalulekile ngokuqapha, uma uhlolisise ukuphendula komzimba emanzini amancane.
Kuyadingeka ukuthi uphuze amanzi amaningi (itiye, amanzi, ijusi) ngangokunokwenzeka ukuze ugcwalise amanzi ebhalansi.
Kuvinjelwe ukushaya umshanelo ezinjalo ezingxenyeni zomzimba njengesisu nesiphansi. Zibhekwa njengeziyingozi kakhulu kowesifazane okhulelwe.
Ukusebenzisa i-douche ehlukile noma ishazi ngemuva kokushiya ekamelweni le-steam, kudingeka uqiniseke ukuthi amanzi awona icebo.
Phakathi kwezinto eziphendukayo egumbini le-steam kufanele uthathe ikhefu hhayi ngaphansi kwemizuzu engu-15-20.
Ngaphambi kokuphuma ekugeza, kutuswa ukuba uphole kahle futhi uphumule, futhi ngemva kokufika ekhaya ulale.
Ngaso sonke isikhathi udinga ukulalela umzimba wakho, ukuqapha impilo yakho, ukuze unqume ukuthi kufanele yini uqhubeke nokuvakashela igumbi lomusi noma kungcono ukugwema isikhathi sokulinda kwengane.
Yini okudingeka ukwazi ngewesifazane okhulelwe?
Ihoyi nekhofi ngesikhathi sokukhulelwa: ithonya, inzuzo nokulimala
Izinganekwane ezivamile kakhulu mayelana nokukhulelwe
Umama wokubhema nezingane ezizayo - kuyahambisana yini?
Indlela yokukhetha ingubo yokugqoka yabesifazane abakhulelwe
Indlela yokwenza konke emsebenzini: isinyathelo ngesinyathelo-isinyathelo
Inkukhu Enye Ephuziwe Ngokushesha
Ungazihlanza kanjani emva kokukhulelwa?
Ukuhlanzwa okuvamile kwezindlu, imikhiqizo yokuhlanza
Yidla isikhumba sobuso
Amakhukhi kaKhisimusi anezithelo ezicandiwe namantongomane
Isitshalo semifino namazambane kanye neklabishi
Ukuvulwa kwendlunkulu entsha kaFondazione Prada eMilan
Izakhiwo ze-pine amafutha abalulekile
Kungani abantu emidlalweni yekhompyutha?
Ukuziphatha okulungile emphakathini nasezindaweni zomphakathi
Isaladi ngamabhontshisi aluhlaza kanye nama-alimondi